IXiaomi Black Shark 2 ihamba nge-AnTuTu kwaye ibhalise amanqaku amangalisayo angaphezulu kwe-430K | Zonke iinkonzo ze-intanethi
UXiaomi ulungiselela isixhobo esitsha, esele silindelwe kwaye kubonakala ngathi siyabetha kwimarike kungekudala. Sithetha ngayo Black Shark 2, ekwabizwa ngokuba Umkhenkce omnyama ohamba esibhakabhakeni, Ngokokuvuza okuthile okujikeleze iwebhu.
Ngeli xesha, i-smartphone midlalo Ukusebenza okuphezulu kudlulile kwibhentshi ye-AnTuTu kwaye kwabhaliswa amanqaku angaphezu kwe-430 lamawaka kwiimvavanyo, okubeka eyona smartphone inamandla kunazo zonke, Ukugqwesa ezinye iziphelo eziphezulu kunye neflegi yezinye iinkampani.
Iziphumo zokubekwa komgangatho weAnTuTu zingqina igama elibhalwe ngegama likaBlack Shark 2 njenge- "Skywalker," njengoko iziphumo zeGeekbench zikwabonakalisile. Amanqaku akhe ewonke ngamanqaku angama-430,882Ukutsiba okukhulu ukusuka kumanqaku angama-359,973 esiphumo sokuqala kwiqonga elinye lovavanyo.
Amanqaku amatsha e-AnTuTu yeXiaomi Black Shark 2
Amanqaku ahlulelwe kubane: amanqaku e-CPU amanqaku ayi-128,597, amanqaku e-GPU ngamanqaku ayi-157,094, amanqaku e-UX ngamanqaku ayi-130,837, kunye nenqaku lamanqaku ali-143,54.
IBlack Shark 2 iya kukhutshwa ngomhla Matshi 18 kwaye iyakubandakanya inkqubo ephuculweyo yokupholisa ebizwa ngokuba Liquid Cooling 3.0 kunye nekhamera yangasemva ephuculweyo. Siyathemba ukuba ezinye zeempawu zabo bangaphambi kwazo ziya kubuya kwakhona, njengee-LED ezinokwenziwa ngokwezifiso ngasemva kunye nenkxaso yezixhobo zemidlalo ezinokutsha.
Isiphelo sendlela nayo yayiza kufika ixhotyiswe ngeprosesa Snapdragon 855 nguQualcommEwe, ayizukuba ngaphantsi. Amanqaku afunyenwe kwi-AnTuTu akafanelekanga ukwenza umsebenzi osezantsi kwe-SoC. Kwelinye icala, kulindeleke ukuba ize kwiinguqulelo ezahlukeneyo, apho amandla e-RAM kunye ne-ROM aya kwahluka. Sijongene nefowuni ene-10 GB ye-RAM kummiselo ophakathi. Nangona kunjalo, konke oku kuhlala kungabonakali. Akukho nto incinci i-Xiaomi yokwenza igosa kunye nazo zonke iinkcukacha zalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IXiaomi Black Shark 2 ihamba nge-AnTuTu kwaye ibhalise amanqaku amangalisayo angaphezulu kwe-430K
I-Fortnite yongeza isithuthi esitsha kunye noopopayi abatsha kuhlaziyo lwayo lwamva nje